ခန်ဓာကိုယ်မှာ ဒီလက်ခဏာတွေ ပြနပွေီဆိုရငျ ဖောလဈအက်စဈ လိုအပျနပေါပွီ…. - Cele Stars
အရှယျရောကျပွီးသူတှကေ တဈနကေို့ ဖောလဈအကျစဈ ၄၀၀ မိုကျခရိုဂရမျ စားပေးသငျ့တယျလို့ အမရေိကနျက ဆေးသိပ်ပံပညာရှငျတှကေ ပွောပါတယျ။ ဖောလဈအကျစဈလို့ချေါတဲ့ ဗီတာမငျ B9 က ကနျြးမာရေးအတှကျ အလှနျကို အရေးကွီးပါတယျ။ ဖောလဈအကျဆဈက သှေးနီဥဆဲလျတှကေို ထုတျလုပျပေးပါတယျ။ ခန်ဓါကိုယျမှာ ဖောလဈအကျစဈဓါတျနညျးလာရငျ သှေးအားနညျးရောဂါ ဖွဈနိုငျပွီး ကိုယျတှငျးအင်ျဂါတှဆေီကို အောကျဆီဂငျြ သသေခြောခြာ မရောကျနိုငျတော့ပါဘူး။
ဖောလဈအကျစဈက အာရုံကွောအဖှဲ့အစညျးအတှကျလညျး အရေးကွီးပါတယျ။ ခန်ဓါကိုယျမှာ ဗီတာမငျဓါတျခြို့တဲ့လာရငျ စိတျဓါတျကလြှယျတာ၊ အာရုံစူးစိုကျနိုငျမှုအားနညျးတာ၊ မလှေ့ယျတာတှေ ဖွဈလာတတျပါတယျ။ တဈခါတရံမှာ အယျလျဇိုငျးမားရောဂါအထိ ဖွဈစနေိုငျပါတယျ။
သံဓါတျအားနညျးလာတဲ့အခါမှာ ဦးနှောကျထဲကို အောကျဆီဂငျြရောကျတာ နညျးသှားတတျပါတယျ။ အဲဒီအခါ ခေါငျးကိုကျဝဒေနာကို ခံစားရတတျပါတယျ။ ဒါတငျမကသေးပါဘူး။ ရငျဘတျအောငျ့တာ၊ ခွထေောကျနာတာလညျး ဖွဈတတျပါတယျ။
သှေးနီဥဆဲလျတှမှော ပါဝငျတဲ့ ဟမေိုဂလိုဘငျတှကေ အောကျဆီဂငျြတှကေို အဆုတျကနေ ခန်ဓါကိုယျက တဈရှူးတှအေားလုံးဆီကို ပို့ပေးပါတယျ။ သံဓါတျအားနညျးလာတဲ့အခါ သှေးနီဥဆဲလျလုံလုံလောကျလောကျမရှိတော့ဘဲ တခွားကိုယျတှငျးအင်ျဂါတှကေို အောကျဆီဂငျြလုံလုံ မပို့ပေးနိုငျတော့ပါဘူး။ အဲဒီအခါ ကွှကျသားအားနညျးတာ၊ ပငျပနျးနှမျးနယျတာ၊ အသားအရနေဲ့ လကျတှေ ဖွူဖြော့လာတာတှေ ကွုံရနိုငျပါတယျ။
မပငျပနျးလောကျတဲ့အလုပျမြိုးကို လုပျနခြေိနျမှာ အသကျရှူမဝတာ ခံစားရပွီဆိုရငျ သှေးနီဥဆဲလျတှေ နညျးနလေို့ပါ။ ဒါ့အပွငျ နှလုံးခုနျနှုနျးမွနျတာ၊ မူးတာ၊ အားနညျးတာမြိုး ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။
အစားအစာတှကေို အရသာခံရာမှာ ပွဿနာရှိလာပွီဆိုရငျလညျး ဖောလဈအကျဆဈခြို့တဲ့ခွငျးရဲ့ လက်ခဏာပါ။ လြှာက အရသာခံတဲ့အဖုတှကေ ဦးနှောကျဆီကို သတငျးအခကျြအလကျတှေ မပို့ပေးနိုငျတော့လို့ပါ။
အစိမျးရငျ့ရောငျရှိတဲ့ အသီးအနှံတှဖွေဈတဲ့ ပနျးဂျေါဖီစိမျး၊ ဟငျးနုနှယျ၊ ကညှတျ စတဲ့အစားအစာတှကေို စားပေးသငျ့ပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ဆီထရဈအကျဆဈ ပါဝငျတဲ့ အသီးတှေ၊ ပဲအမြိုးမြိုး၊ မှိုတှကေိုလညျး စားလို့ရပါတယျ။ ခန်ဓါကိုယျမှာ ဒီလို လက်ခဏာတှေ ပွလာပွီဆိုရငျ ဆရာဝနျနဲ့ မွနျမွနျပွသငျ့ပါတယျ။
ခန္ဓာကိုယ္မွာ ဒီလက္ခဏာတျြေပနေပြီဆိုရင် ဖောလစ်အက္စစ် လိုအပ်နေပါပြီ….
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေက တစ်နေ့ကို ဖောလစ်အက်စစ် ၄၀၀ မိုက်ခရိုဂရမ် စားပေးသင့်တယ်လို့ အမေရိကန်က ဆေးသိပ္ပံပညာရှင်တွေက ပြောပါတယ်။ ဖောလစ်အက်စစ်လို့ခေါ်တဲ့ ဗီတာမင် B9 က ကျန်းမာရေးအတွက် အလွန်ကို အရေးကြီးပါတယ်။ ဖောလစ်အက်ဆစ်က သွေးနီဥဆဲလ်တွေကို ထုတ်လုပ်ပေးပါတယ်။ ခန္ဓါကိုယ်မှာ ဖောလစ်အက်စစ်ဓါတ်နည်းလာရင် သွေးအားနည်းရောဂါ ဖြစ်နိုင်ပြီး ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါတွေဆီကို အောက်ဆီဂျင် သေသေချာချာ မရောက်နိုင်တော့ပါဘူး။
ဖောလစ်အက်စစ်က အာရုံကြောအဖွဲ့အစည်းအတွက်လည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ခန္ဓါကိုယ်မှာ ဗီတာမင်ဓါတ်ချို့တဲ့လာရင် စိတ်ဓါတ်ကျလွယ်တာ၊ အာရုံစူးစိုက်နိုင်မှုအားနည်းတာ၊ မေ့လွယ်တာတွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတရံမှာ အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါအထိ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
သံဓါတ်အားနည်းလာတဲ့အခါမှာ ဦးနှောက်ထဲကို အောက်ဆီဂျင်ရောက်တာ နည်းသွားတတ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါ ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာကို ခံစားရတတ်ပါတယ်။ ဒါတင်မကသေးပါဘူး။ ရင်ဘတ်အောင့်တာ၊ ခြေထောက်နာတာလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
သွေးနီဥဆဲလ်တွေမှာ ပါဝင်တဲ့ ဟေမိုဂလိုဘင်တွေက အောက်ဆီဂျင်တွေကို အဆုတ်ကနေ ခန္ဓါကိုယ်က တစ်ရှူးတွေအားလုံးဆီကို ပို့ပေးပါတယ်။ သံဓါတ်အားနည်းလာတဲ့အခါ သွေးနီဥဆဲလ်လုံလုံလောက်လောက်မရှိတော့ဘဲ တခြားကိုယ်တွင်းအင်္ဂါတွေကို အောက်ဆီဂျင်လုံလုံ မပို့ပေးနိုင်တော့ပါဘူး။ အဲဒီအခါ ကြွက်သားအားနည်းတာ၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်တာ၊ အသားအရေနဲ့ လက်တွေ ဖြူဖျော့လာတာတွေ ကြုံရနိုင်ပါတယ်။
မပင်ပန်းလောက်တဲ့အလုပ်မျိုးကို လုပ်နေချိန်မှာ အသက်ရှူမဝတာ ခံစားရပြီဆိုရင် သွေးနီဥဆဲလ်တွေ နည်းနေလို့ပါ။ ဒါ့အပြင် နှလုံးခုန်နှုန်းမြန်တာ၊ မူးတာ၊ အားနည်းတာမျိုး ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
အစားအစာတွေကို အရသာခံရာမှာ ပြဿနာရှိလာပြီဆိုရင်လည်း ဖောလစ်အက်ဆစ်ချို့တဲ့ခြင်းရဲ့ လက္ခဏာပါ။ လျှာက အရသာခံတဲ့အဖုတွေက ဦးနှောက်ဆီကို သတင်းအချက်အလက်တွေ မပို့ပေးနိုင်တော့လို့ပါ။
အစိမ်းရင့်ရောင်ရှိတဲ့ အသီးအနှံတွေဖြစ်တဲ့ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း၊ ဟင်းနုနွယ်၊ ကညွတ် စတဲ့အစားအစာတွေကို စားပေးသင့်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဆီထရစ်အက်ဆစ် ပါဝင်တဲ့ အသီးတွေ၊ ပဲအမျိုးမျိုး၊ မှိုတွေကိုလည်း စားလို့ရပါတယ်။ ခန္ဓါကိုယ်မှာ ဒီလို လက္ခဏာတွေ ပြလာပြီဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ မြန်မြန်ပြသင့်ပါတယ်။